Uku kunyora kwemaoko font tekinoroji uye iri chaizvo rova ​​iyo chaipoipo tsamba chiitiko chemakore apfuura. Vanotungamira vatengesi vanoziva kuti kana vakakuita kuti uvhure chidimbu chetsamba, iwe unonyanya kugona kuverenga chidimbu. Kana iwe ukaverenga chidimbu, iwe unokwanisa kwazvo kufona. Kana iwe ukafona, iwe ungangotenga. Izvo zvese zvinotanga neakavhurika, hazvo!
Chikonzero nei iyi font ingatendeke ndeyekuti vanosiyanisa sei saizi yetsamba dzakafanana (tarisa ma 'e's nekumhanya), uye nzvimbo yekusiyana (ese ari maviri kuchenjera uye Tracking). Maitiro acho zvechokwadi anotora pfungwa dzako, pane zvakakwana musiyano kubva kune wakajairika mhando kuti unyengere iwe uchifunga kuti zvakanyorwa-neruoko.